KENKAN WƆ Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latgalian Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nuer Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Ponapean Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Asafo nhyiam dwumadi
Ahenni Asa so asiesie
Bible ka Kristofo mmarima akuw abien a wodi asɛyɛde a ɛwɔ asafo no mu ho dwuma ho asɛm, wɔne “ahwɛfo ne asafo mu asomfo.” (Filipifo 1:1) Yɛwɔ mmarima dodow bi a wɔresom saa wɔ asafo biara mu. Adwuma bɛn na asafo mu asomfo yɛ ma yenya so mfaso?
Wɔboa asafo mu mpanyimfo no. Asafo mu asomfo yɛ mmarima a wɔne Yehowa wɔ abusuabɔ a emu yɛ den, yetumi de yɛn ho to wɔn so, na wɔyɛ nsi; wɔn mu bi yɛ mmerante na ebinom nso yɛ mpanyin. Wɔyɛ nnwuma a ɛho hia wɔ asafo no mu, nanso mpɛn pii no, wɔn de no nyɛ ɔkyerɛkyerɛ ne nguanhwɛ adwuma. Eyi ma asafo mu mpanyimfo no nya kwan de wɔn adwene si ɔkyerɛkyerɛ ne nguanhwɛ adwuma no so.
Wɔyɛ nnwuma a mfaso wɔ so. Asafo mu asomfo binom adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa ne sɛ wobegye wɔn a wɔba asafo nhyiam no nyinaa fɛw so. Wɔma ebinom hwɛ akasam afiri, nhoma kyekyɛ, ne asafo no sikasɛm so, na wɔkyekyɛ asasesin a wɔkɔ asɛnka wom ma asafo no mufo. Wɔboa nso ma wosiesie Ahenni Asa so. Asafo mu mpanyimfo no tumi ma wɔboa wɔn a wɔn mfe akɔ anim no. Ɔpɛ mu a asafo mu asomfo fi yɛ adwuma biara a wɔde hyɛ wɔn nsa no ma asafo no mufo nyinaa nya obu ma wɔn.—1 Timoteo 3:13.
Wɔyɛ Kristofo mmarima a wɔyɛ nhwɛso pa. Nea wogyina so paw asafo mu asomfo yɛ suban pa a wɔda no adi sɛ Kristofo. Sɛ wɔyɛ dwumadi ahorow wɔ asafo nhyiam ase a, wɔhyɛ yɛn gyidi den. Sɛ wɔyɛ nhwɛso pa wɔ asɛnka adwuma no ho a, ɛma yɛn nso yɛbɔ yɛn ho mmɔden. Esiane sɛ wɔne asafo mu mpanyimfo bom yɛ adwuma nti, wɔboa ma anigye ne biakoyɛ ba asafo no mu. (Efesofo 4:16) Bere rekɔ so no, wɔn nso betumi abɛfata sɛ asafo mu mpanyimfo.
Asafo mu asomfo yɛ mmarima bɛn?
Dɛn na asafo mu asomfo yɛ de boa ma asafo no dwumadi kɔ so pɛpɛɛpɛ?
Bere biara a wobɛkɔ Ahenni Asa so no, gye bere kakra fa hu asafo mu mpanyimfo anaa asomfo no mu biako kosi sɛ wubehu wɔne wɔn mmusua nyinaa.